यति बेला इटहरीका मेयर द्धारिकालाल चौधरी चर्चाको शिखरमा छन । उनले आफु माथि लागेको आरोपको खन्डन गर्दै यो पित्त पत्रकारिता हो भनेका छन । विगत दुई बर्ष देखी बिराट अनुपाम नामक पत्रकारले उनको पाटिका सदस्य र
काठमान्डाैं - चीनमा चार वर्ष आठ महिना बन्दीजस्तै भएर बसेकी सुनिता तामाङ (परिवर्तित नाम) नेपाल फर्कन सफल भएकी छन् । चिनियाँ नागरिकसँग बिहे गरेर चीन आएकी उनी चरम घरायसी हिंसामा परेकी थिइन् । उनलाई नेपाल
काठमाडौँ - ‘मैले त हाम्रो भत्ता बढेको थाहै पाएकी थिइनँ, बढेको भए त राम्रो भयो, म त एकदम खुसी भएँ । अब कहिलेबाट पाउने हो ? तपाईलाई थाहा छ ?’ काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ निवासी ९३ वर्षीया म
भक्तपुर – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद मिलेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहसनको पात्र नबन्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले बुधबारबाट सुरु गरे
पोखरा – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘रन वे’ तयार भएको छ । निर्माण कार्य थालेको १५ महिनामा विमानस्थलको ‘रन वे’ तयार भएको हो । यतिबेला विमानस्थलको टर्मिनल भवन, एप्रोन (यात्रु जहाजमा
बेनी - सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द्र 'विप्लव' समूहका नेता कार्यकर्ताले म्याग्दीमा पदबाट राजिनामा दिन थालेका छन्। प्रहरी र प्रशासनले निगरानी बढाउन र पक्राउ गर्न थालेपछि विप्लप समूह निकट व
डोल्पा - चैतमा तातोपानीको कुण्डमा नुहाए रोग निको हुने विश्वासका कारण डोल्पामा स्थानीयको भीड लागेको छ। जमिन मुनिबाट प्राकृतिक रुपमा निस्किएको तातोपानीमा चैत १५ देखि २५ गतेभित्र नुहाए सबै रोग निको हुने
राहत सामाग्री लिएर बारा पुगेको धुर्मुस
काठमाडौं- हाँस्य कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) राहत सामग्रीसहित हावाहुरी प्रभावित क्षेत्र बारा पुगेका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको तर्फबाट राहत सामाग्री लिएर बारा पुगेक
पिडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकालाई देउबाको आग्रह
काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बारा र पर्सामा आइतबार साँझ आएको असिना–पानीसहितको भीषण हावाहुरीका कारण तीन दर्जन बढी व्यक्तिको अकालमै ज्यान गएको र सयौँ घा
रातारात आँधिहुरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश यसरी उद्धारमा खटिए
काठमाडौं – उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’का पुत्र तथा विद्यार्थी नेता दिपेश पुन रातारात तराईको आँधिहुरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्दारमा खटिएका छन् । आइतवार रातिसम्म काठमाडौंमै रहेका पुनले आँ